Baahin: Axad, Aug 21, Weriye C/fitaax C. Geedi ~ Daljir ~ Galkacyo. Muqdisho ka bixitaankii Al-shabaab kadib; M/weyne Shariif oo ka hadlay is-badellada dhacay; Sugidda amniga ee Muqdisho Al-shabaab kadib; R/wasaare Gaas oo ka hadlay qorshaha dawlada; Waftigii Puntland ee booqanayey degmooyinka gobolka Bari oo ku soo laabtay Bossaso, kana xog warrmay la-kulamadoodii. – Radio Daljir
Agoosto 21, 2011 12:00 b 0
Munaasabad ku aaddan gabagabada wareegga koowaad ee barnaamijka Tartan iyo Tacliin oo xalay lagu qabtay xarunta Daljir ee Bossaso.